Hielscher अल्ट्रासोनिक्स ले तपाईंलाई अल्ट्रासोनिक उपसाधन को एक विस्तृत उत्पाद रेंज प्रदान गर्दछ जो प्रत्यक्ष प्रयोगशाला को प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष sonication पूर्ण वाणिज्यिक उत्पादन को लागि। हाम्रो सोनोट्रोड्स, प्रवाह-मार्फत रिएक्टरहरू र दुवै प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सोनाइनिकका लागि उपरीक्षणहरूको बारेमा एक अवलोकन तल फेला पार्नुहोस्।
अल्ट्रासोनिक सोनोट्रोड्स लाई पनि अल्ट्रासोनिक भनिन्छ टिप, जांच, सींग वा औंला। Hielscher टाइटेनियम, कांच र सिरेमिक देखि बना अल्ट्रासोनिक जांचहरु र धेरै आकार (diameters) संग आफ्नो प्रक्रिया को स्थिति (जस्तै प्रक्रिया तीव्रता, उच्च तापमान, औषधि ग्रेड आदि) संग मेल खाने प्रस्ताव प्रदान गर्दछ।
सही सोनोट्रोड आकार छान्नुहोस्: सोनोटरोड को व्यास तरल भोल्युम र प्रसोधन तीव्रता संग सम्बन्धित छ। सानो सतह क्षेत्र (सानो व्यास) को साथ एक सोयोट्रोड का उपयोग करके, अल्ट्रासाउंड पावर को अधिक ध्यान दिया जाता है और इस प्रकार अधिक गहन उच्च आयाम, जिसके परिणामस्वरूप एक बड़े सतह के साथ सोनाट्रोड्स पर अल्ट्रासोनिक ऊर्जा एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है न्यून आयाम। ठुलो सोनोट्रोड डाईमिटरहरू ठूला भोल्युमहरू प्रशोधन गर्न प्रयोग गरिन्छ, तर कम तीव्रता प्रदान गर्छन्।
अतिरिक्त उपलब्ध उपलब्धिहरु संग, बेंच-माथि र औद्योगिक सोनोट्रोड्स मा अल्ट्रासोनिक आउटपुट या तो बढावा या कम हुन सक्छ। Hielscher विभिन्न बूस्टर आकारहरू प्रदान गर्दछ जसले तपाईंको अल्ट्रासोनिक प्रोसेसरको बढ्दो सेटिङ विकल्पहरूको लागि अनुमति दिन्छ।
अल्ट्रासोनिक ल्याब यन्त्रहरूको लागि
Hielscher को प्रयोगशाला अल्ट्रासोनिक्स को अल्ट्रासोनिक सींग, प्रवाह कोशिकाओं, रिएक्टरहरु र उपसाधन को एक विस्तृत श्रृंखला हो। अल्ट्रासोनिक उपकरण UP200St एक बहुमुखी आधारभूत इकाई हो जुन साधारण जांच प्रकारको यन्त्रबाट (प्रयोग गरिएको प्रत्यक्ष सीधा सोनिकेशनको लागि प्रयोग गरिएको) जस्तै कि VialTweeter वा TD_CupHorn जस्ता तीव्र अप्रत्यक्ष सोनिकेशनको लागि एक विश्वसनीय उपकरणमा।
विभिन्न सोनोट्रोड्स र सहायक उपकरण उत्पादन दायरा पूरा गर्दछ
बेन्च-माथिको लागि & औद्योगिक अल्ट्रासोनिक्स
बेंच-माथि र औद्योगिक स्तरमा उच्च मात्राको अल्ट्रासोनिक प्रोसेसिंगको लागि औद्योगिक अल्ट्रासोनिक्स 500W देखि 16 किलोवाटको साथमा भनिने ब्लक सोनोट्रोड र क्यास्केट्रोड ™ ™। ब्लक सोनोट्रोड को एक क्षैतिज सतह को क्षेत्र ले विशेषता को विशेषता हो, जो तरल मा ऊलन को स्थानांतरित गर्दछ। क्यास्काट्रोड्स ™ रिंग सोनोट्रोड हो जुन एक विस्तृत क्षैतिज सतह क्षेत्र प्रदान गर्न को लागि धेरै छल्लेहरु को सुविधा छ, जो तरल मा अल्ट्रासोनिक थरथरानित गर्दछ।
बेंच-माथि र औद्योगिक अल्ट्रासोनिक्सका लागि, अल्ट्रासोनिक ऊर्जा उत्पादनको जाँचले मार्फत बूस्टरको प्रयोग गरी बढ्न वा घटाउन सकिन्छ। प्रवर्धकले आयाम बढ्न वा कम गर्न सक्छ र यसैले प्रक्रिया आवश्यकताहरु को लागि अल्ट्रासोनिक आयाम र तीव्रता को समायोजन गर्न एक महत्वपूर्ण उपकरण हो।
अल्ट्रासोनिक ब्लक सोनोट्रोड
अल्ट्रासोनिक उपकरण UP200St संग सोनाट्रोड S26d2।
अल्ट्रासोनिक तरल प्रक्रियाहरु:
अल्ट्रासोनिक प्रवाह कक्ष
अल्ट्रासोनिक प्रवाह-मार्फत रिएक्टर कक्षहरू प्रयोगशाला अल्ट्रासोनिक्सका लागि उपलब्ध छन् साथै औद्योगिक अल्ट्रासोनिक उपकरणहरूको लागि।
एक अल्ट्रासोनिक रिएक्टरले बन्द प्रणालीमा माध्यम सानको लागि सक्षम बनाउँछ – या त प्रवाह-मार्फत मोड (एकल पास वा पुन: प्राप्ति) मा वा संलग्न ध्वनिको लागि चैम्बरमा।
एक अल्ट्रासोनिक फ्लो-थ्रु प्रणालीको प्रयोग गर्न आवश्यक हुन्छ, जब उच्च भोल्युम स्ट्रिमहरू र / वा उच्च चिपचिपा सामग्री सोनाकेट हुन्छ। प्रणालीको माध्यमबाट लगातार प्रवाहको ब्याच-प्रकारको प्रशोधनमा धेरै फाइदाहरू छन्:
1. अल्ट्रासोनिक इनलाइन प्रसोधन गरेर, प्रशोधन
सावधानीपूर्वक उच्च हुन्छ किनकि सबै सामग्रीहरू कक्षबाट जमिनमा cavitation क्षेत्रमा फेड गरिन्छ। यो उच्चतम गुणवत्ता उत्पादनको साथ एक सम्वन्धी तरल प्रसोधनमा परिणाम गर्दछ।
2. निरन्तर अल्ट्रासोनिकेशन परिणाम धेरै धेरै प्रसोधनमा
किनकि सबै सामाग्री रिएक्टर चैम्बर मा cavitational क्षेत्र गुजरता छ।
3. प्रवाह दर समायोजन गरेर र यसैले सामग्री को अवधारण समय cavitational "hot spot" मा,
नियन्त्रण र रखरखाव गर्न सकिन्छ। आवश्यक तापमान कोयम राख्न ठंडा जैकेट संग प्रवाह कक्षहरू र गर्मीको एक्सचेंजर मद्दतको वैकल्पिक स्थापना।
4. बन्द प्रणालीमा sonication प्रक्रिया सुनिश्चित गर्दछ
जस्तै, खतरनाक सामाग्री संग काम गर्दा (अस्थिर, biohazardous, संक्रामक, या pathogenic नमूने)।
प्रवाह-मार्फत रिएक्टर द्वारा sonication द्वारा, उच्च viscous तरल पदार्थ (250.000cP सम्म) को प्रकृया सजिलै संग गर्न सकिन्छ। हेलसेस्टर प्रवाह सेल रिएक्टरहरू स्टेनलेस स्टील वा काँचबाट बनाइन्छन् र प्रक्रियाको तापमान नियन्त्रण गर्न कूलिंग जैकेटसँग सुसज्जित छन्। सबै प्रवाह कक्ष कक्षहरू प्रेसिजन योग्य छन्। Hielscher को औद्योगिक अल्ट्रासोनिक प्रोसेसर आसानी देखि उच्च viscosities संग तरल पदार्थ को संभाल गर्न सक्छन् (जस्तै मूंगफली मक्खन, प्रिय, कच्चा, सीमेंट पेस्ट)। विशिष्ट प्रक्रिया आवश्यकताहरू मेल खानको लागि विभिन्न रिएक्टर आकार (मात्रा) र ज्यामिति उपलब्ध छन्।
प्रत्यक्ष बनाम अप्रत्यक्ष Sonication
सीधा सोनिकेशन यसको अर्थ हो कि अल्ट्रासाउन्ड सीधा प्रसंस्करण तरल मा युग्मित हुन्छ। सीधा सोनिकेशनको लागि, जांच-प्रकार अल्ट्रासोनिक्स प्रयोग गरिन्छ, जहाँ अल्ट्रासोनिक सींग / सोनोट्रोड माध्यममा डुबिएको छ। ऊर्जा सोनोट्रोड / जांच को माध्यम ले सीधा तीव्रता संग नमूना मा फैलिएको छ ताकि नमूना तीव्र र चाँडै प्रसोधित हुन्छ।
को शब्द अप्रत्यक्ष sonication अल्ट्रासोनिक तरंगहरु को परीक्षण ट्यूब को पर्खाल को माध्यम ले अल्ट्रासोनिक स्नान को माध्यम ले नमूना तरल मा युग्मन को युग्मन को वर्णन गर्दछ। अल्ट्रासोनिक तरंगहरु को रूप मा पानी को स्नान र बीकर को पर्खाल को माध्यम ले यात्रा गर्न को लागि अल्ट्रासोनिक तीव्रता जो अंततः नमूना तरल मा युग्मित हुन्छ एकदम कम छ। यसबाहेक, एक साधारण अल्ट्रासोनिक नली वा अल्ट्रासोनिक सफाई टैंकले ट्यांकको माध्यमबाट धेरै असामान्य र अस्थिर अल्ट्रासोनिक हट स्पेसको साथ धेरै कम अल्ट्रासाउन्ड पावर आपूर्ति गर्छ। हेलसिचको VialTweeter र कपहार्न अप्रत्यक्ष सोनिक्स को लागी उपसाधन हुन् जो अत्यधिक अल्ट्रासोनिक ऊर्जा को गहन अप्रत्यक्ष सोनियम को लागि वितरित गर्दछ।
ग्लास र स्टेनलेस स्टीलबाट बनाइएको अल्ट्रासोनिक रिएक्टरहरू
अप्रत्यक्ष sonication मा अल्ट्रासोनिक ऊर्जा नमूना ट्यूब वा बीकर को माध्यम ले माध्यम मा फैलिएको छ। अप्रत्यक्ष अल्ट्रासोनिकेशन द्वारा, पार-प्रदूषण, नमूनाकरण र नमूना फोमिंग गर्नबाट बचाउन सकिन्छ। यसरी, यो रोगीणिक वा बाँझ नमूनाहरूलाई बेवास्ता गर्न एउटा आदर्श प्रविधि हो। हेलसिचको भ्याट ट्वीटर र कप हर्न तीव्र अप्रत्यक्ष सोनिकेशनको लागि विश्वसनीय उपकरण हुन्।
The VialTweeter 10 विलियम्स को एक साथ अप्रत्यक्ष सोनिकेशन को लागि एक विशेष ब्लक सोयोट्रोड हो। शक्तिशाली 200W अल्ट्रासोनिकरेटर UP200St द्वारा संचालित, भिअल ट्वीटर 10 वाट सम्म प्रत्येक श्वेतमा। थप संलग्न संलग्न क्लैंप VialPress अगाडि ठूलो परीक्षण पोतहरू प्रेस गर्न अनुमति दिन्छ। यसरी, माथि5ठूला भाइरसहरू एकै पटकमा अननिर्भर रूपमा sonicated गर्न सकिन्छ।
VialTweeter अप्रत्यक्ष सोनिकेशनको लागि
UP200St-TD_CupHorn जस्ता अल्ट्रासोनिक कप सींग, सीधा र अप्रत्यक्ष सोनाकरणको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। एक कप सींग काम गर्दै सिद्धान्त एक अल्ट्रासोनिक स्नान वा सफाई टैंक संग तुलना गर्न सकिन्छ तर धेरै अधिक तीव्र अल्ट्रासोनिक ऊर्जा संग। ह्याण्ड्रोरो को रूप मा कप हॉर्न प्रकार्यहरु लाई नमूना मा अल्ट्रासाउंड तरंगहरु लाई स्थानांतरित गर्दछ। जब कप सींग नमूना भरिएको छ भने, अल्ट्रासोनिक ऊर्जा सिधा सिमुलेटरमा सार्नु पर्छ। वैकल्पिक रूपमा, कप सींग पानीमा भरिएको हुन सक्छ र परीक्षण ट्यूब (हरू) अप्रत्यक्ष सोनिकेशनको लागि पानीको स्नानमा राखिनेछ। कुनै पनि तरिका, UP200St-TD_CupHorn – 200 वाट अल्ट्रासोनिक प्रोसेसर द्वारा संचालित – शक्तिशाली र विश्वसनीय sonication प्रदान गर्दछ।
अल्ट्रासोनिक कप सींग TD_CupHorn तीव्र sonication को लागि
-औंलाको Sonotrode ले samples नमूनाहरूको एक साथ Sonication को लागी ultra अल्ट्रासोनिक प्रोब सुझाव दिन्छ